Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Balaadhan ooy Jaaliyada Denmark Qabatay.
Kulan Balaadhan ooy Jaaliyada Denmark Qabatay.
Posted by ONA Admin	/ December 16, 2013
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 15/12/2013 lagu qabtay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen shir balaadhan oo siwanaagsan loosoo abaabulay.
Shirkan ooy kasoo wada qaybgaleen guud ahaan hay,adaha kala duwan ee Jaaliyada Somalida Ogadenia ee wadankan Denmark ay ka koobantahay sida ururka dhalinyarada ee OYSU, ururka Hooyooyinka Somalida Ogadenia iyo Hay,ada Samafalka Ogadenia kuwaasoo dhamaantood kahawlgala wadankan Denmark.
Kulankan oo looga gollahaa qiimaynta iyo waxqabadka hawlaha kala duwan ee Jaaliyada uqabsoomay sanadkan siidhamaanaya iyo ajendeyaasha uqorshaysan sanadkan soosocda ee 2014 haduu eebuhu awooda leh yiraahdo.
Kulankan oo lagu gorfeeyay laguna qiimeeyay guud ahaan talooyinka iyo aragtida hawl-wadeenka Jaaliyadu ay soobandhigeen kana dhiibteen intii uu shirkan socday ayaa waxaa hoosta laga wada xariijay hirgalinta iyo dar dar galinta hawlaha kala duwan ee Jaaliyada horyaala iyo sidii loosii laba jibaari lahaa waxqabadka joogtada ah ee looga bartay Jaaliyada Denmark.
Sidoo kale waxaa kulankan kasoo qaybgalay oo warbixino iyo talooyin wax ku,ool ah oo iskugu jira guubaabo iyo xog waran kajeediyay madasha kulanka marti sharaf kasoo qaybgalay kulanka.
Dhankale waxay Jaaliyada Denmark iyo ururka OYSU oo iskaashanaya ku guda jiraan hirgalinta hawlo muhiim ah oo horaan uqorshaysnaa kuwaasoo lafilayo in mudada kooban ee sanadkan dabayaaqada ah kadhiman lagu soo gabgabeeyo haduu eebuhu yiraahdo.
Gabagabadii iyo gunaanadkii kulankan ayaa kusoo dhamaaday is afgarad iyo in dhamaan hawl-wadeenkii madasha kulankan kasoo qaybgalay ay isku balansadeen tayaynta iyo hirgalinta mashaariicda ladoonayo in lahirgaliyo sida oogu dhakhsaha badan.